About Us – Roda Havet Forening
Ururka Badda Cas waxa la aasaasay 2003. Waxa uu fadhigiisu yahay magaalada Stockholm ee caasimadda Iswidhan. Waxa uu ururku u taagan yahay in uu caawiyo jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Stockholm. Dadka ku cusub dalka iyo dadkii muddada dheer deggenaa labadaba waa urur u taagan taageeriddooda. Waxa muhiim ah isku xidhnaanta dadka iyo fahamka nidaamka dalkan. Ururkani waxa uu u furan yahay qof kasta oo buuxiya shuruudaha u yaalla ururka. Waxa uu ururkani xoogga saaraa dhallinyarada iyo carruurta oo loo sameeyo tartanno ku saabsan sheeko- gaaban iyo maansada oo lagu qorayo afsoomaali ama afiswidhish.
SAYID - AHMED JAMA, Ordförande
FARHIA ABDI, Vice ordförande
ABDELRASHID YUSUF, Ekonomienhet Kassör
NIMCO ISMAIL IBRAHIM , Sekreterare
Ahmed IBRAHIM, Media och Säkerhetsansvarig
Muse YUSUF, Förening Utvecklare
Ibrahim Omar, Solidaritet & Social frägor
Ahmed Yusuf, Utbildning mansavdelning
SAMSAM KARSHE, Utbildning kvinnors avdelning